トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin Seoul | musiyano pakati mweya naye
▼ peji iyi ndima (kutamira pane kombiyuta)
mapatya Seoul uye soulmate kuti musiyano
mapatya Seoul uye kuzosangana riri ukama pakati chishamiso
mapatya Seoul pfava dhirika nyore CHECK
zvechokwadi [3500 Yen Free kune vanoziva remangwana kana zvinofunga yokunyatsoongorora kuti vawane nzira
nyika yomudzimu, zvichava kushandiswa shoko mapatya Seoul zvakanaka. Kazhinji, kuti ungave toziva zvakadzika shoko mweya naye, vamwe vanhu vanofunga kuti mapatya mweya uye mweya wako anofanana.
Zvisinei, mapatya mweya uye mweya wako pane musiyano wakajeka. Twin Seoul uye pakutanga mumwe mweya, ndiko akava maviri vakakamura mweya wayo. Nemamwe mashoko, mapatya mweya ndiwo ishamwari yake, unogona zvakare kutaura kuti mumwe nomumwe wavo.
The chikonzero nei zvakanga zvakakodzera kuti huviri mweya, kana mweya kunangana kuvandudza uye kuwedzera upenyu mune humwe upenyu, uye kana vakaisa nezvipingamupinyi kudzidza nezvorudo, kuti zvimwe zviri nani kuti huviri dzidziso kuti zvinokwanisika kuti kudzidza uri simba.
Twin Seoul uye pano muna
musiyano mweya naye, tichakurukura musiyano nyore akanyonganisa mapatya mweya uye mweya naye.
? mweya sezvikamu uye mweya naye
mapatya mweya ndiye chimiro mumwe mweya rava mumwe munhu huviri, unogona kunzi mweya sezvikamu. Ukuwo uye mweya wako, nguva pakutanga zhinji kare upenyu zvakanga mumwe mweya mukana musangano, I ukama kuti mumwe kukwezvwa. Mune mamwe manzwi, ndiye nei pane musiyano mukuru panguva mweya pamwero.
? ukama musiyano
mapatya Seoul, nokuti ndinogara aimbova mumwe mweya, kubatana ndiro simba chaizvo. Mweya rakakamurwa kubvunzurudza mbiri zvikuru, uye kuedza kuva mumwe. Sangano chaizvo, zviri zvakare kukanganisa akapoteredza uye zvakatipoteredza panguva. Uyezve, kuva kuona rimwe divi pachangu kuti handina kuziva kusvikira zvino rimwe, dzimwe nguva kurwadza panguva.
Ukuwo, soulmate apo vari vaviri mumwe mweya, ndizvo zvakanga zviri yakadzika ukama muupenyu hwekare. Kunyange munguva yakapfuura mupenyu mumwe nokukwezvwa mweya, tave kuwedzera mumwe muchiPolish mumwe. Saka, kuva nomweya wako unogona kupedza imwe rugare nguva, raireva sezvo vajaire vachifunga yazara. Sezvo
? vanosangana mukana
mapatya Seoul ndiye ishamwari mweya wangu, mumwe bato hakuwaniki mumwe chete munhu. Zvakanzi kuti hazvo kusangana munyika ino. Mushure mweya huviri, rangu mapatya mweya kunyange munyika ino isu vagorarama noupenyu munyikadzimu. Kunyange zvazvo vaigara munyika iyoyo nyika ino, zvakatipoteredza uye zera, muenzaniso akadai yangu nyika rakasiyana zhinji, mukana kuti asangane sokuti vashoma.
Ukuwo, mweya naye sokuti pakachinja upenyu yomunhu, kunyange basa anonzi vasarudzirwa kusvika. Uyezve, nokuti mweya naye pane vamwe pane mumwe munhu, mukana kuti Kusangana munyika ino ava yepamusorosoro.
inosangana mapatya mweya uri kubuda aine mapatya Seoul uye ino zvinogona kunzi chishamiso
mumwe wavo Chinhu anenge pedyo chishamiso kusangana. Mupikisi kuti ndiye chete munhu mumwe, hazvirevi hazvo hazvo vo pedyo dzavo munyika ino. Asi, nekuti kana ndakasangana chishamiso ndichava kubvunzurudza achitsvaka kuva pamwe mumwe nomumwe, ungave cherechedzai nokukurumidza ndiyo kuvapo mapatya mweya.